Abaalmarinta Caddaaladda - Falal Argagix - Dilkii Shirkadda Union Texas Petroleum
Dilkii Shirkadda Union Texas Petroleum
Macluumaadka ku saabsan ...
Karachi, Baakistan | Noofembar 12, 1997
Subaxnimadii 12-kii Noofembar, 1997-kii, afar ka tirsan shaqaalaha Union Texas Petroleum (UTP) ayaa shaqo ugu kicitimay magaalada Karachi, Pakistan. Intii uu gaarigoodii dul marayey meel buundo ah, laba qof oo qoryo sitay ayaa ka soo baxay gaari cas oo Honda Civic ah kaddibna rasaas ku furay gaarigoodii. Afar qof oo shaqaale Mareykan ah, iyo darawalkoodii u dhashay dalka Pakistan, ayaa weerarka lagu dilay.
Goobjoogeyaal badan ayaa weerarka u arkay in uu ahaa mid looga aargoosanayo xukunkii la xukumay Mir Aimal Kansi oo dhacay laba maalmood ka hor, inkastoo aan aragtidaasi si rasmi ah loo xaqiijin. Kansi waxaa lagu xukumay dilkii uu sanadkii 1993-kii ku dilay laba qof oo ka tirsan shaqaalaha CIA-da meel dibedda ka ah xarunta xafiiska ee ku tiil Langley, Virginia.
Barnaamijka Abaalmarinta Caddaaladda waxaa lagu bixinayaan abaalmarin gaarayso illaa $5 milyan haddii la helo warbixin suuragelinaysa in caddaalad lagu qaado kuwii ka mas’uulka ka ahaa weerarkan.
Abaal-marin gaaraysa $100,000 ayaa waxaa la siiyey macluumaad keeney qabashadii Toting Craft Hanno, oo ahaa xubin ka mid ah Kooxda Abu Sayyaf Group.